बाउण्ड्री बराबर भएको भए कसले जित्थ्यो विश्वकप ? | नेपाली पब्लिक बाउण्ड्री बराबर भएको भए कसले जित्थ्यो विश्वकप ? | नेपाली पब्लिक
बाउण्ड्री बराबर भएको भए कसले जित्थ्यो विश्वकप ?
नेपाली पब्लिक २०७६, १ श्रावण बुधबार १०:२६
काठमाडौँ – निर्धारित ५० ओभर र सुपर ओभरमा ईङ्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डले बराबरी गरे। त्यसपछि ‘बाउण्ड्री’बाट विश्वकप विजेताको टुङ्गो लाग्यो। इङ्ल्याण्डले घरेलु मैदानमा पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि उचाल्यो।
यसरी विजेता चुनिएको विवाद पनि भइरहेको छ। यस्तो धेरैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ बाउण्ड्रीमा पनि बराबरी भएको भए विजेता कसरी चुनिन्थ्यो होला ?
यदि कुनै पनि क्रिकेट खेल निर्धारित ओभरमा बराबरी पुगेर टुङ्गिन्छ भने सो खेल सुपर ओभरमा प्रवेश गर्छ। सुपर ओभरमा अधिक्तम ३ खेलाडीले ब्याटिङ गर्न पाउँछन्। यस ओभरमा पहिले ब्याटिङको मौका दोश्रो पारीमा फिल्डिङ गरेको टोलीले पाउँछ। यस ओभरमा दुई विकेट झरेपछि ब्याटिङ गर्ने टोलीको सुपर ओभर समाप्त हुन्छ। यसमा फिल्डिङको नियम ५० ओभरको खेलमा जे हो त्यही हुन्छ भने दुबै टोलीले १—१ रिभ्यू लिन पाउँछन्। अन्तिममा जुन टोलीले सुपर ओभरमा धेरै रन बनाउँछ, खेल उसैले जित्छ।
यसमा पनि बराबरी भएपछि बाउण्ड्रीबाट विजेताको टुङ्गो लगाइन्छ। यस क्रममा ५० ओभरको खेल र सुपर ओभरमा दुबै टोलीले बनाएको बाउण्ड्री९चौका र छक्का० गनिन्छ, जसको धेरै हुन्छ, त्यही टोलीले सो खेल जित्छ। इङ्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डको फाइनल खेलमा यहि नियमबाट ईङ्ल्याण्डलाई नयाँ विश्वकप विजेता घोषित गरिएको हो। यस खेलमा इङ्ल्याण्डले २६ वटा बाउन्ड्री हानेको थियो भने न्युजिल्याण्डको बाउण्ड्री संख्या १७ थियो।
सबै परिस्थितिमा बाउण्ड्री बराबरी हुँदा ?
यसमा विजेताको टुङ्गो फेरि सुपर ओभरबाट लगाइन्छ।नियम अनुसार सबैभन्दा पहिले सुपर ओभरको अन्तिम बलबाट हेरिन्छ। अन्तिम बलमा जसले धेरै रन बनाएको छ, विजेता सोही टोली बन्छ। यसमा पनि बराबरी भएको छ भने क्रमशः पाँचौ , चौथो, तेश्रो, दोश्रो तथा पहिलो बल हानेर बनाइएको रनका आधारमा विजेता तोकिन्छ। तर यसमा पनि बराबरी भएमा के गर्ने भन्ने बारेमा आईसिसीको नियममा केहि स्पष्ट प्रावधान छैन। एजेन्सी